Al-Shabaab Oo Xukun Karbaash Ah Ku Fulisay Laba Ruux - Awdinle Online
Al-Shabaab Oo Xukun Karbaash Ah Ku Fulisay Laba Ruux
February 11, 2020 (Awdinle Online) –Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa Goob fagaaro ah waxaa ay xukun karbaash ah ay ku fuliyeen Gabar iyo Wiil la sheegay inay ku kaceen fal Zino ah, iyagoo aan wax Guur ah soo marin.
War qoraal ah oo lagu faafiyay baraha Internet-ka Al-shabaab ayaa waxaa ay sheegeen in xukunka Karbaashka ahaa uu ka dhacay goob faraago ah isla, markaana Wiilka iyo Gabadha lagu fuliyay min 100 Karbaash, kadib markii ay sameeyeen gogol dhaaf.
Sidoo kale Al-shabaab ayaa sheegtay in Wiilka oo lagu magacaabo Saalim Xasan Abuukar uu xaafad ka tirsan Muqdisho kala baxay Gabadha oo magaceeda lagu sheegay Qaali Maxamed, iyagoona isla aaday deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Al-shabaab ayaa tilmaamtay in Wiilka iyo Gabadha uu Maxkamadooda kasoo dacweeyay Aabe Maxamed Abuukar oo dhalay Qaali Max’med, sidaasina xukunka Karbaashka loogu fuliyay labada ruux.
Si kastaba Al-shabaab ayaa dhowr jeer waxaa ay xukuno isugu jira Dil iyo Karbaash ay ku fuliyeen dad loo jeediyay eedeeymo kala duwan, waxaana xukunadaas inta badan ay ka dhaceen deegaanada ay Gobolada dalka kaga sugan yihiin.
Previous articleCiidamada Ammaanka Oo Gacanta Ku Dhigay Rag Xalay Dil Geystay
Next articleMacalinkii Xulka Qaranka Soomaaliya oo Shaqada isaga tagay Sabab Amni darro darteed.